Yangon Buildings in Need of Repair after Earthquake | Myanmar Business Today
Home Business Local Yangon Buildings in Need of Repair after Earthquake
Yangon Buildings in Need of Repair after Earthquake
A 4.1 magnitude earthquake centered some 13 miles southwest of Taikkyi City hit Yangon on November 12, leaving 25 buildings leaning slightly to one side. Eight of these buildings need repair works to set them upright again.
The affected buildings include one in Pazundaung Township, two in South Okkalapa Township, one in Thingangyun Township, seven in Dawbon Township and 14 in Tamwe Township.
“There isasafe limit to how many degreesabuilding can tilt,” said Daw Hlaing Maw Oo, Secretary of the Yangon City Development Committee (YCDC). “We found eight buildings leaning beyond the safe limit. However, they don’t need to be demolished. They can be put back into an upright position. The authorities will handle this.”
The eight buildings in need of repair works include one each in Pazundaung and Thingangyun townships, two in Dawbon Township and four in Tamwe Township.
Residents continue to live in these buildings and they will have to bear the cost for the reinforcement works required to set the structures upright again. The YCDC has sent the list of inclined buildings to the Yangon Regional Government.
The committee, according to Daw Hlaing Maw Oo, does not consider the affected buildings uninhabitable, as repair works will be enough to restore them to full habitability.
YCDC is also inspecting buildings constructed between 1988 and 1991 to determine their habitability. Most of these old buildings are located in Kyauk Myaung, Tamwe, Sanchaung and Kyimyindaing townships.
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း မှော်ဘီမြို့နယ်အတွင်း ဗဟိုပြု၍ မဂ္ဂနီကျု့ ၄.၁ ရှိ ငလျင်တစ်ခု နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က ညဦးပိုင်းတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားခြင်းကြောင့် အဆောက်အအုံ ၂၅ လုံး တိမ်းစောင်းသွားပြီး ၈ လုံးမှာ ပြန်တည်မတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
ထိုသို့ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားခြင်းကြောင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် ၁ လုံး၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်တွင် ၂ လုံး၊ သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ်တွင် ၁ လုံး၊ ဒေါပုံမြို့နယ်တွင် ၇ လုံးနှင့် တာမွေမြို့နယ်တွင် ၁၄ လုံးတိမ်းစောင်းသွားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
“ ယိုင်သွားတယ်ဆိုရင် ယိုင်သွားတာ ဘယ်လောက်ကျော်ရင်တော့ ပြန်တည်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထား တာရှိပါတယ်။ ယိုင်သွားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကျော်နေတဲ့ အဆောက်အအုံ ၈ လုံး တွေ့ပါတယ်။ ဖြိုစရာမလိုပါဘူး။ ပြန်မတ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပြန်မတ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာနဲ့ စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်လှိုင်မော်ဦးက ပြောသည်။
ထိုသို့ ပြန်လည်တည်မတ်ရန်လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံ ၈ လုံး မှာ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် ၁ လုံး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ၁ လုံး၊ ဒေါပုံမြို့နယ်တွင် ၂ လုံးနှင့် တာမွေမြို့နယ်တွင် ၄ လုံး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ယိုင်နေသည့်အဆောက်အအုံများတွင် တာမွေမြို့နယ်မှ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံ ၁၄ လုံးခန့် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည။်
ယင်းသို့ ပြန်လည်တည်မတ်ရန်လိုအပ်သည့်အဆောက်အအုံများ၏ စာရင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြထားပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို ယင်းအဆောက်အအုံများတွင် နေထိုင်သူများမှ ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဒုညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ အဆောက်အအုံများသည် အလုံးလိုက်ဖြိုချရန်မလိုအပ်ဘဲ ပြန်လည်တည်မတ်လိုက်ပါက လူနေထိုင်၍ ရနိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အအုံစာရင်းထဲတွင် မထည့်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်လှိုင်မော်ဦးက ပြောသည်။
YCDC က ကန်ထရိုက်တိုက်များစတင် ဆောက်လုပ်သည့်အချိန် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ထားသည့်အဆောက်အအုံများရှိသည့် ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေ ၊ စမ်းချောင်း နှင့် ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ် တို့တွင် အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အအုံ ရှိ ၊ မရှိကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုနှစ်သြဂုတ်လအတွင်းက ပြောထားသည်။
Vol7Issue 47
Next articleA Sea Change for Plastic